global-warming | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
September 8, 2009 — mmweather
ကျိုဒိုသတင်းဌာနက ရေးသားထားတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ –
လာမဲ့ ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကမ္ဘာ့သမုဒ္ဒရာရေပြင် ပူနွေးလာမှုသာ အခုအတိုင်းဆက်ဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုရင် ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားခဲ့တဲ့ အဖျက်စွမ်းအား အလွန်ကြီးမားတဲ့ ကက်ထရီနား ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြီးထက်ပိုကြီးတဲ့ စူပါ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း (အာရှမှာတော့ – စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း) ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံ သုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ကြောင်း ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
တစ်နာရီကို ၂၄၁.၂ ကီလိုမီတာ (၁၄၉.၈ မိုင်) နှုန်းထက်ပိုတဲ့ လေတိုက်နှုန်းနဲ့ မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာရင် အဲဒါကို စူပါတိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်းလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ နာဂိုယာတက္ကသိုလ်က မိုးလေဝသသုတေသနလေ့လာရေးအဖွဲ့က အဲဒီလာမဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေမှာ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုရပ်တန့်သွားအောင် လူသားတွေက မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် စူပါမုန်တိုင်းကြီးဟာ တစ်နာရီကို ၂၈၈ ကီလိုမီတာ (၁၇၉ မိုင်)နှုန်းအထိ ပြင်းထန်နိုင်တယ် လို့ အဲဒီကြေငြာချက်မှာဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
အခုအတိုင်း သမုဒ္ဒရာရေပြင် အပူချိန်ဆက်တိုးနေဦးမယ်ဆိုရင် အခုရာစုနှစ်အကုန်မှာ ၂ ဒီဂရီမှ ၃ ဒီဂရီအထိ အပူချိန်တိုးလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ ၊ ၂ဝ၄ဝ ခုနှစ်နဲ့ ၂ဝ၈၇ ခုနှစ်ကြားမှာ ခုနက စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ သူတို့ရဲ့ လေ့လာရေး ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ တွက်ချက်မှုအရ ပြောထားပါတယ်။ Earth Simulator supercomputer နဲ့တွက်ချက်တိုင်းတာရရှိချက်တွေအရ အခုလို ခန့်မှန်းထုတ်ပြန်နိုင်တာဖြစ်ကြောင်းလဲ သိရပါတယ်။
သမုဒ္ဒရာရေပြင်ရဲ့ အပူချိန်မြင့်မားလာမှုဟာ မုန်တိုင်းကြီးများကို အင်အားပိုမိုကောင်းလာစေနိုင်တာအပြင် အပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့် ရေငွေ့ပျံတက်မှုကိုလည်း ပိုမိုဖြစ်စေပြီး အဲဒီဒေသမှာ ရွာသွန်းမဲ့ မိုးရေချိန်ကိုလည်းမြင့်တက်စေမှာဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာချက်မှာ ပါဝင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တော့ အဲသလို တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးတွေဖြစ်ပေါ်မှုဟာလည်း လျော့နည်းသွားစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲသလိုမှ မထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တော့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ စူပါမုန်တိုင်းကြီးရဲ့ ဗဟိုမှာ ဖိအား ၉ဝ၂ hectopascals ရှိပြီး လေတိုက်နှုန်း ၂၈၈ ကီလိုမီတာ (၁၇၉ မိုင်နှုန်း) ဟာ – ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်က ကက်ထရီနား မုန်တိုင်းရဲ့ ဗဟိုက လေဖိအား ၈၆၆ hectopascals ထက်ပိုကြီးတဲ့ အဖျက်စွမ်းအား အလွန်ကောင်းတဲ့ မုန်တိုင်းကြီးတွေ ဂျပန်နိုင်ငံကို ခြိမ်းခြောက်လာလိမ့်မယ်လို့ လဲ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ Simulator က တွက်ချက် တိုင်းတာမှုတွေ အရ Tohoku ဒေသမှာ အဲဒီအချိန် စူပါမုန်တိုင်းကြီးတွေသာဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် မိုးရေချိန် ၁ မီတာကျော်အောင် ရွာသွန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ တွက်ချက်ခန့်မှန်းထားတဲ့အကြောင်း ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
၂ဝဝ၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအား တိုက်ခတ်သွားခဲ့သော အဆင့်-၅ စူပါဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း ကက်ထရီနာ
ကက်ထရီနား မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးမှုများ
ကက်ထရီနား မုန်တိုင်းကြောင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုများ
မူလစာ – Original post at “The Japan Times Online”Tuesday, Sept. 8, 2009-Kyodo News ဂျပန် Online web site
Posted in Education, Weather News. Tags: global-warming, weather. LeaveaComment »